पाँचौ महोत्सवले नुवाकोट आर्थिक विकासले फड्को मार्नेछ | Trishuli Khabar - Trishuli News Network
अध्यक्ष, नुवाकोट उद्योग वाणिज्य संघ
नुवाकोट महोत्सव किन गर्नुभएको हो ?
हामीले पहिलोदेखि पाँचौसम्म आइपुगेका छौँ । महोत्सवले कृषि, पर्यटन, उद्योग, धार्मिक तथा ऐतिहासिक क्षेत्रहरुको पहिचानका साथै प्रचार प्रसार र नुवाकोट सम्भावना रहेका पूर्वाधार निर्माण्गर्न आउँदा नुवाकोटमा के के कुराको सम्भावना रहेको छ भनेर बुझ्न पाइन्छ । लगानीकर्ताहरुलाई सहज पनि हुन्छ । दोस्रो महोत्सवले होटल वाटर टावर बन्यो । यो महोत्सवले कृषि, पर्यटनको सम्भावनाहरुको खोजी हुने छ । यसका साथै उद्योगको सम्भावना धेरै रहेकाले अहिलेको महोत्सवले उद्योग कलकारखाना भित्र्याउनको लागि पहल गर्नेछ । अहिले हामी प्रदेशस्तरीय महोत्सव गर्दैछौँ । यहाँ प्रदेशकै उद्योगी व्यवसायीहरु अवलोकनको लागि आउनुहुनेछ । त्यसैले पनि अहिलेको महोत्सव महत्वपूर्ण रहेको छ ।
वर्षेनी महोत्सव सञ्चालन गर्दा यसको महत्व घट्दैन र ?
होइन, हरेक वर्ष महोत्सव गर्दा महत्व घट्दैन बरु नुवाकोटको पहिचानमा थप प्रचारप्रसारमा थप सहयोग पुग्छ । हामीले अहिलेको महोत्सवलाई प्रदेशस्तरीय भनेर नाकाकरण गरेर यसको व्यापकतामा जोड दिएका छौँ । यसको महत्व बढाउनका लागि हामी प्रयासरत छौँ । वर्षेनी महोत्सव गर्ने कुरा छ, अघिल्लो वर्षको महोत्सवमा पनि हामीले पछिल्लो वर्ष नै महोत्सव गर्छौँ भनेर घोषणा गरेका थियौँ । अघिल्लो वर्षको निर्णय कार्यान्वयनका लागि पनि हामीले यस वर्ष महोत्सव गर्नैपर्ने थियो । फेरी अघिल्लो पटकको महोत्सव विविध कारणले गर्दा सहजताका साथ सम्पन्न हुन सकेन । त्यस कारण पनि यस पटकको महोत्सवलाई हामी भव्य र सभ्य बनाउन लागिरहेका छौँ ।
सम्पन्न भएका महोत्सव मध्ये तपाईलाई मन परेको महोत्सव कुन हो र किन ?
पहिलो महोत्सव मलाई मन परेको थियो । यो महोत्सवले नुवाकोटलाई ठूलो फाइदा पुगेको छ । अहिले गर्न लागेको पाँचौ नुवाकोट महोत्सव पनि त्यो भन्दा बढी उत्साहजनक र उपलब्धीमूलक हुनेछ । पहिलो भन्दादोस्रो दोस्रो भन्दा तेस्रो हुँदै हामीले सुधार गर्दै लगेका छौँ ।
महोत्सवबाट हुने आम्दानीको सही उपयोग भएन भन्ने आरोप पनि छ नी ?
महोत्सवमा भएका आम्दानी र हरहिसावलाई हामीले चुस्त दुरुस्त राख्ने गरेका छौँ । अनावश्यक खर्चलाई कटौती गरेका छौँ । समग्रमा भन्नुपर्दा आर्थिक पारदर्शीता नै हाम्रो मुख्य लक्ष्य हो । महोत्सवबाट भएको आम्दानीलाई हामीले रचनात्मक काममै लगाउने गरेका छौँ । सिटिटिभी जडानदेखि पछिल्लो समय हाटबजार सञ्चालनमा आएको छ । विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थासँग समन्वय गरेर इलम प्रशिक्षण केन्द्रमा सञ्चालनमा आएको हाटबजारका कारण स्थानीय उत्पादनहरुको बजारीकरणको लागि सहजता महसूस गरिएको छ । हामीले असहाय तथा गरिब विरामीहरुको लागि सहयोग पनि गर्दै आएको छु । विभिन्न समयमा विपत्तिमा परेका नागरिकहरुलाई राहत वितरणमा पनि संघले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । हामीसँग भरपर्दो र बलियो आम्दानीको स्रोत नहुँदा हामीले सोचेका र गर्न लागेका धेरै काम गर्न नसकिएको कुरा ठीकै हो ।
महोत्सव प्रवेशको लागि कति शुल्क तिर्नुपर्छ ?
यस पटकको महोत्सव अवलोकनका लागि विद्यार्थीको ४० रुपैयाँ र सामान्य मान्छेले ६५ रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । यस पटकदेखि हामीले हाम्रा सदस्यहरुका लागि निःशुल्क प्रवेश गराउने भएका छौँ । स्थायी पासको लागि ३०० रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ । यो पास एक पटक लिएपछि जतिवेला पनि प्रवेश गर्न पाइन्छ ।
अर्को पटक चुनाव जित्नलाई साधारण सदस्यलाई निःशुल्क पासको व्यवस्था गरिएको हो ?
नुवाकोट उद्योग वाणिज्य संघले महोत्सवको आयोजना गर्छ । सदस्यहरुको हक हितको लागि हामीले उहाँहरुले गरिएको हो । चुनाव जित्नको लागि हामीलाई निःशुल्क पास दिएर लोभ देखाउनु छैन । चुनाव जित्नको लागि महोत्सव कुर्नु पर्दैन, यसको लागि हामीले काम गरेका छौँ । त्यो काम नै काफी छ । ट्राउटको बजार विस्तारको लागि हामीले काम गरेका छौँ । कृषिको लागि हाटबजारको व्यवस्था मिलाएका छौँ । उद्योगीहरुलाई समेटेर काम गरेका छौँ । राम्रो काम गर्ने मान्छेलाई चुनावी तार्गेट लिनुपर्दैन भन्ने मैले विश्वास लिएको छु ।
यस पटक महोत्सवमा के हेर्न पाइन्छ र नुवाकोटवासीलाई के फाइदा हुन्छ ?
यस पटक माटाको भाँडा, ढिकीजाँतो प्रर्दशनी, मोही पारेर मोही खान पाउने व्यवस्था, भेडा बाख्राको लागि छुट्टै स्टल र दुधबाट के के बन्छन् त्यसको विक्रीका साथै नुवाकोटमा उत्पादन भएका सबै कृषि तथा अन्य वस्तुको प्रर्दशनी यो महोत्सवमा हुनेछ । महोत्सवमा दर्शकको उपस्थिति बढी हुन्छ । अवलोकनकर्ता बढ्ने वित्तिकै त्यहाँ आर्थिक क्रियाकलाप पनि हुन्छ । महोत्सव अवधि भर स्थानीय होटल तथा रेष्टुरेण्डमा व्यवसायमा बढी कारोवार हुन्छ । त्यस्तै सार्वजनिक सवारी साधनमा पनि निकै चाप बढ्छ । स्थानीय व्यवसायीले आफूसँग भएका सामानहरु सहजै विक्री गर्न पाउन्छन् । स्थानीय उत्पादनलाई बजार खोज्न अन्त धाउनुपर्ने अवस्था रहँदैन । महोत्सवमा लुकेर रहेका संस्कृति र परम्परालाई प्रदर्शन गर्ने थलोको रुपमा विकास गर्न सकिन्छ । प्रतिभाहरु देखाउने ठूलो मञ्च पनि महोत्सव नै हो भन्ने मलाई लाग्छ । यस पटक हामीले घरेलु उत्पादनलाई प्राथमिकता दिएका छौँ । स्थानीय उत्पादनहरुले बजार पाउँछ । कृषि तथा पशुपालनको लागि परामर्शसहित बाख्रा, भेडा, दुध, मासुसहित स्टल राख्दैछौँ । महोत्सवमा हामीले हात्ती प्रदर्शनी गर्दैछौँ । बट्टार, त्रिशूली, कोलोनीमा फुड फेस्टिवल गर्दैछौँ ।
यो आरोप एकतर्फ हेर्दा हो कि जस्तो पनि लाग्न सक्छ । अर्को तर्फ नबुझ्नु भएको हो कि भन्ने लाग्छ । मेला महोत्सवमा स्वभाविक रुपमा रमाइलो पनि गरिन्छ । तर, सबै कार्यक्रम रमाइला मात्र छैनन् । रमाइलो हेर्न आउने आन्तरिक पर्यटकहरुले गर्ने आर्थिक क्रियाकलापले नुवाकोटलाई फाइदा पुग्छ । पहिला सामान्य कलाकार बोलाइन्थ्यो, अहिले राष्ट्रिय कलाकार ख्यातीप्राप्त कलाकार ल्याउन लागेका छौँ । राष्ट्रिय कलाकार आउँदा अवलोकनकर्ताको सहभागिता बढी हुन्छ । त्यसपछि आर्थिक कारोवार पनि बढी नै हुन्छ । यस पटक हामीले नुवाकोटका उत्पादनहरुलाई खोजी खोजी स्थान दिन लागेका छौँ ।
अहिले नै महोत्सवबाट यति नै फाइदा होला भन्ने अनुमान गर्न सकिँदैन । अहिले एक लाख २५ हजार दर्शक भित्र्याउने अभियानमा रहेका छौँ । अहिले नै हामीले यति नै फाइदा हुन्छ भन्ने भन्न सकिँदैन । सदस्यहरुलाई निःशुल्क प्रवेशको व्यवस्था मिलाएकाले सोचेजस्तो हुँदैन ।
हामीले दर्शक आकर्षित गर्न धेरै आधारहरु तयार पारेका छौँ । महोत्सवमा हामीले स्थानीय उत्पादनहरुलाई प्राथमिकता दिने र प्रदर्शनीसहित विक्री गर्नेछौँ । संघमा आवद्ध सदस्यहरुलाई निःशुल्क प्रवेश पासको व्यवस्था मिलाइएको छ । नुवाकोट जिल्लाभित्रका व्यापारीहरुले स्टल शुल्कमा २५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था मिलाइएको छ । जिल्लाका लघु उद्यमीहरुको बजारीकरणको लागि प्राथमिकता दिएका छौँ ।
TAGS: ताराबहादुर कार्कीनुवाकोट उद्योग वाणिज्य संघमहोत्सव